BitGo enweta usoro iwu ihu ọma na mkpọrọ kaadị akụ
Kaadị nche mmalite BitGo natara ihu ọma na US na-eme ka a ruru eru mụta iwu maka digital akụ. BitGo Trust e mma site South Dakota Division of Banking, nke pụtara na o nwere ike ugbu a na-enye institutional ahịa a usoro nchekwa ngwọta maka digital akụ, kwuru isi nnabata na iwu ojii Shahla Ali.
“Ugbu … anyị na-enye ihe online na-ekpo ọkụ wallet ngwọta, nke dị ka onye ọ bụla ibudata anyị software na-echekwa ha ego. Anyị na-enye a custodial ngwọta nke bụ Nchikota na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ wallet… olileanya anyị ọ bụ ụlọ nke a n'elu ikpo okwu si, n'ezie na-egosi na regulators na ndị ahịa na ihe nlereanya a nwere ike na-arụ ọrụ na anyị nwere ike n'ezie na-ewu a oké obi ụlọ ọrụ na-echebe akụ.” BitGo Aims ike a ala mkpọrọ àjà bụ ngwá ọrụ iji obi sie investors na obodo ọchịchị myiri na cryptocurrencies nwere ike inye uru ndị a iche iche. “Anyị ghọtara na ha ga-kacha mma ozi site a mụta iwu bụ onye e kpamkpam lekwasịrị anya ha akụ” o kwuru.
Mt. Gox si ụlọọrụ ụgwọ nwere ike ugbu a faịlụ na-ekwu maka Bitcoin refunds
The trostii nke ogologo-defunct Bitcoin mgbanwe Mt. Gox ka a mara ọkwa na ụlọọrụ ụgwọ nwere ike ugbu a tinye-ekwu na mboanuohia azụ tọrọ atọ Bitcoin site a na nso nso mma ghara ịgbanwe usoro. Nobuaki Kobayashi, ọka iwu-na-iwu na-agwọ trostii maka Mt. Gox kwuru na a tọhapụ na Wednesday na mbụ ụlọọrụ ọrụ nke mgbanwe ga-ruo Oct. 22 na faịlụ àmà akwado ha na-ekwu maka refunds nke kaadị akụ ẹkenịmde mgbanwe.
“Anyị nwere tọhapụrụ ihe online ghara ịgbanwe azọrọ ịgba akwụkwọ usoro … nke na-enye ohere ụlọọrụ ọrụ na faịlụ ha àmà nke na-ekwu site na online ụzọ na njikọ na obodo ghara ịgbanwe obodo,” Kobayashi kwuru. The tọhapụ ndị a gara aga ozi ọma na Mt. Gox si online ịgba akwụkwọ usoro e meghere ka onye (ndị na-abụghị ụlọọrụ) ọrụ na Aug. 23Rd 2018. Ugbu, January 24th, 2019 bụ esote (anya) ikpe ụbọchị ebe trostii mkpebi ga-ma-mma ma ọ bụ jụ a Tokyo ikpe, mere ihe niile bụ isiokwu n'ọdịnihu mgbanwe.
Blockchain ike mbo mbuli ahia ego site $ 1T
Blockchain bụ ike jupụta na ukwuu nke $1.5 puku ijeri-dollar ọkọnọ-ina ọdịiche na zuru ụwa ọnụ ahia ego site easing ego maka obere- na-ajụ-sized ụlọ ọrụ na abụrụ ahịa, na nchọpụta ọhụrụ na-ekwu. Jikotara aka wee mụụrụ na tọhapụrụ site World Economic Forum na Bain & Company, ndị nnyocha na-egosi, site gbapụ blockchain, zuru ụwa ọnụ ego nwere ike n'ịwa ihe mmezi $1 puku ijeri na ahia ego a gaara agụrụ funahụrụ.
Dị ka otu Asian Development Bank ngụkọta oge, zuru ụwa ọnụ na ahia ego ọdịiche dị ugbu a na $1.5 puku ijeri na-eme atụmatụ na-eto eto ka $2.4 puku ijeri site 2025. The nnyocha na-akọwa na nke a nke n'ụzọ dị ukwuu na-ebilite si mmachi na ịnweta n'aka na mgbazinye ego maka SMEs na-achọ mụbaa ọrụ ha, ebe-ekesa na netwọk nwere ike ịkọrọ ndekọ achụmnta ego gafee ego oru tinyere ọkọnọ yinye na-eme ka nghọta ka ulo oru’ ịtụkwasị obi. “Ha ga-enyere mitigate n'aka ize ndụ, ala ụgwọ ma wepụ ihe mgbochi na ahia,” na-eme nnyocha dee.
Kaadị mgbanwe OKCoin kọwakwuru na 20 ọzọ US na-ekwu,
Ọ na-fọrọ nke nta ka otu afọ ebe ọ bụ na otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa cryptocurrency mgbanwe manyere mechie ibo ụzọ ya na Ruth nke a ọchịchị-amanye trading ban. ugbu a, na mgbanwe, na n'oge gara aga, China dabeere OKCoin, na-eying a comeback na n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa. Ugbu a headquartered na San Francisco, OKCoin si U.S. mkpanaka mara ọkwa na Wednesday na ọ natara usoro iwu ihu ọma mụbaa n'ime 20 ọhụrụ na-ekwu,, ukwuu ịgbasa ya apụghị iru n'ime otu nke kasị ibu n'ụwa kaadị ahịa.
"Iji maka cryptocurrency ahịa iru ya zuru nwere, mgbanwe dị ka OKCoin nwere na-arụ ọrụ na ẹdude na ọhụrụ regulators maka kọnvatịbụl virtual ego, digital ngwongwo, na / ma ọ bụ ala,"Kwuru Tim Buyn, mgbanwe ọrụ si CEO. "Anyị otu na-arụ ọrụ ịdị uchu n'ime mgbagwoju nke US usoro iwu frameworks. Anyị na-enwe obi ụtọ na-a isi nzọụkwụ n'ihu dị ka nzube anyị gbarie ihe mgbochi na-egbochi a n'ezie uwa digital akpan owo ahịa mgbe n'ịgbaso ogologo ike ụkpụrụ. "Na mbụ, OKCoin USA bụ naanị na-emeghe ka ahịa na California, ebe ọ dọtara gburugburu $700,000 na kwa olu, ogo ya banyere 125th n'etiti uwa mgbanwe, kwa CoinMarketCap.
Kraken Daily Market Report maka 12.09.2018
$383,567 Ada aba
$136M ahịa gafee ahịa niile taa
NEW Owa: TechStockHouse:...
Quantstamp Up 50% ụnyaahụ, A ...
October 30, 2018 na 1:25 AM